Black Magic: အင်္ဂလိပ်စာမှာကျွန်တော်ဆရာကြီး
Posted by Black Magic | Posted in ဟာသများ | Posted on 11:58 PM
ကျနော်ဟာ အင်္ဂလိပ်စာပေကို ဝါသနာပါ သည့်အလျောက် ငယ်ငယ်ကတည်းက လေ့လာလိုက်စားခဲ့ပါသည်။ အင်္ဂလိပ်စာနှင့် ပတ်သက်ပါကလည်း ဖတ်လိုက်ရတဲ့စာအုပ်တွေ စုံနေတာပါပဲ။ မြင်ဆရာ ကြားဆရာဆိုတာလည်း ပြော မနေပါနဲ့တော့ မည်းကနဲမြင်လိုက်တာနဲ့ တင် ပါးစပ်က " ဆရာ " လို့ အလိုလို ထွက်သွားသည်ထိ ပေါတာ။ ကျွမ်းကျင်သလားလို့မေးရင် ကျနော့်ကို စော်ကားတာနှင့် အတူတူပါပဲ။ ဘာပြုလို့ လဲဆိုရင် ကျနော်ပြောတဲ့ အင်္ဂလိပ်စကား ကျနော်ရေးတဲ့ အင်္ဂလိပ်စာကို အင်္ဂလိပ် လူမျိုးတွေတောင် နားမလည်ဘူး ပြောပါ က. ကြွားတယ်လို့ မထင်ပါနှင့်။ မယုံလျှင် ဤပုံကိုကြည့်ပါလို့ ပြောရမ လိုပင်.........။
- ကျနော့်မှာ ခွေးတစ်ကောင်ရှိသည် - I'madog.
- ခု ငါ ရန်ကုန်မှာ ရှိတယ် - Now I have Rangoon .
- မင်း ဘယ်က လာတာလဲ- Where you come?
- ဒါကို ဘယ်လိုခေါ်လဲ- How to call this?
-ငါ နေ့လည်စာ စားမယ်- I eat lunch.
- ငါ စားပြီး ပြီ- I eat finish.
- ငါ အအေး သောက်ချင်တယ်- I want to drink cold.
- ငါ ရေနွေးကြမ်းသောက်ချင်တယ်- I want to drink water warm.
- မနက်ဖန်- Tomorrow
- သဘက်ခါ- Tomorrow , Tomorrow
- မင်း အကြီးအကျယ် ပြဿနာကောင်ပဲ- You many many problem man
- အထဲမှာ ဘယ်သူရှိလဲ- Who have inside?
- မင်းဟာမင်း လုပ်ချင်လုပ် မလုပ်ချင်နေ မင်းမလုပ်ရင် ငါလည်းမလုပ်ဘူး- You want you do, you no do , I no do
-ငါ လူပျိုပါ- I no marriage
- နေ မကောင်းဘူး - Body no good
- မင်း စားပြီး ပြီလား- You eat finish?
- ငါဆေးသောက်မယ်- I drink medicine
- ကွမ်းစားဆေးရွက်- Medicine leaf
- မင်း မကောင်းဘူး- You no good
- တီဗီ ဖွင့်လိုက်ပါ- Open the television
- တီဗီ ပိတ်လိုက်ပါ- Close the television
- ငါ တီဗီကြည့်နေတယ်- I look the television
- မနေ့က ည- Yesterday night
- အတူတူပဲ- Same same
- မင်းအကိုကြီး- Your big brother
- မင်းရဲ့ညီလေး - Your small brother
- ဒီဟာ- This one
- ဟို ဟာ- That one
- မင်းဟာ- Your one
- ငါ့ဟာ- My one
- ဘယ်သူ့ဟာလဲ- Who one? ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ ကျနော့်ရဲ့ အရည်အချင်းကို သဘောပေါက် လောက်ပါပြီနော်။ ကျနော့်ရဲ့အင်္ဂလိပ်စာကျွမ်းကျင်မှုကို အင်္ဂလိပ်လူမျိုးတွေတောင် လက်ဖျားခါ တာ အိန္ဒိယနိုင်ငံသားတွေလောက်တော့ အပျော့ပေါ့။ ရွာမှာဆိုရင် ဘွဲ့ရ သုံးလေး ယောက်ရှိတဲ့အထဲမှာ ကျနော်က တော်ဆုံး , သူတို့ဆိုရင်( hen ) ကို ကြက် ထီး ကြက်မ မခွဲတတ်ဘူး။ သူတို့ကကျနော့်လာမေးတယ်break down ဆိုတာ ဘာလဲတဲ့ ? သူတို့မသိလို့ ရှင်းပြပေးပါတဲ့ , အားကိုးရှာတယ်ပေါ့။ ကျနော်ကလည်းပြောပြလိုက်ပါ တယ် break down ဆိုတ ဘရိတ် မကောင်းတာလို့, သူတို့ကလည်းကျေးဇူး တင်ပါတယ်တဲ့။ ဟုတ်တယ်လေ ဒေါင်း သွားပြီဆိုမှတော့
ပွဲပြီးသွားပြီပေါ့။ တော်တော်တုံးတဲ့ကောင်တွေ။ ဒီကောင်တွေကလည်း ကျနော့်များ တကယ့်ဆရာကြီးများမှတ်နေလား မသိ ပါဘူး။တစ်ခါတစ်လေ တော်တော်ကို ကြံကြံဖန်ဖန်မေးတယ်ဗျ။စဉ်းစားကြည့် ပါ- ဝါးဟားဟား- ဘယ်လိုခေါ်လဲတဲ့? ဘယ်ရမလဲ ဒီလိုစမ်းလို့ bamboo Laughing လို့ ပြန်ဖြေလိုက်တယ်။ ဟုတ်တယ်လေ အဲဒီလိုမပြောလို့ ရေခဲ မုန့် လို့ ပြောရင် သူတို့က ယုံမှာမဟုတ် ဘူးဗျ။ ကျနော်ကလည်း ပြန်မေးလိုက်တယ်- တူတူရေဝါး- ဘယ်လိုခေါ်လဲလို့ဆိုတော့ တစ်ယောက်မှမသိဘူး။ မသေမချင်းမှတ် ထား hammer hammer water bamboo လို့ ခေါ်တယ်ဆိုတော့ သဘောတွေကို ကျလို့။ ပြောရအုံးမယ် တစ်ရက်မှာတော့ သူတို့ကျနော့်အိမ်အလည်လာရင်း" ဟေ့ ကောင် ထက်ခေါင် ဘာဟင်းချက်လဲ" တဲ့။ ကျနော်ကလည်း လက်ဝါးထောင်ပြ ပြီး five , ဟင်း လို့ပြောတော့ " မင်းဟာ ဘာလဲဟ " တဲ့။ အဲဒါပြောတာ ဒီကောင် တွေ တုံးပြီးရင်း တုံးရင်း , ဘယ်လိုသင် သင် မတတ်ဘူး။ ဘယ်လိုလုပ် ဘွဲ့ရလာ တယ် မသိပါဘူး။နည်းနည်းလေးမှ အလှည့်မခံဘူး။ ကျနော်လည်း စိတ်မ ရှည်တာနဲ့ " ဒါ ဘယ်လောက်လဲ " ဆိုပြီး နောက်တစ်ခါ လက်ဝါးဖြန့်ပြီး ထောင်ပြ တော့ " five" လို့ တစ်ညီတစ်ညာတည်း ဖြေကျတယ်။ " အေး five ဆိုတော့ ငါး , အဲဒီတော့ ငါးဟင်း ပေါ့ကွ " လို့ ဆိုရင်ပဲ ဝိုင်းပြီး ကလော်တုတ်ကြပါသည်။ တစ်ခါတစ်လေမှာတော့ ရွာထဲက ကလေးတွေ ကျနော့်ကို သူတို့မသိတာ လေးတွေလည်း လာမေးတတ်ကြပါ တယ်။ ကလေးတစ်ယောက်ဆိုရင် " " ဦးထက် idiom တို့ slang တို့ ဆိုတာ ဘာလဲ ဟင်" " ဪ သားကလည်း အာဆီယံဆိုတာ ဒို့မြန်မာနိုင်ငံအပါ အဝင် အရှေ့တောင်အာရှမှာ ရှိတဲ့ နိုင်ငံတွေကို ခေါ်တာသားရဲ့- စလင်းဆို တာကတော့ကွာ မင်းဘူး မင်းကြားဖူး တယ်မို့လား" " ဟုတ်ကဲ့ " " အေး အဲဒီ မင်းဘူးနားမှာ ရှိတဲ့မြို့ကို စလင်း လို့ ခေါ်တယ်ကွ" ဆိုတော့ ကလေးကလည်း ရောယောင်ပြီး " ဪ ဟုတ်ကဲ့ ဟုတ်ကဲ့ " တဲ့။ ကျနော်လိုစာပေ ဗဟသုတ နှံစပ်တဲ့ သူမို့ တော်သေးတယ်။နို့မို့ဆို ဒီကလေး တွေနဲ့ မဟာအရှက်တော်ကွဲအုံးမှာ။ အဲဒီကလေးက ထပ်မေးသေးတယ် ဗျ- " ဦး No Pain , No Game ဆိုတာ ဘာလဲ" " မကစားရင် မ နာဘူး" လို့ ပြော တာ" " ကျေးဇူးနော် ဦးထက် " ဆိုပြီး ပြန်သွားလေရဲ့။ ဒီလိုပါပဲ ကျနော့်မှာ ကိုယ့်အလုပ် ကိုယ် ကောင်းကောင်းလုပ်ရတယ်ကို မရှိဘူး။သူများကိစ္စတွေ ရှင်းပေးနေတာ နှင့် အချိန်တွေဘယ်လိုကုန်သွားမှန်း မသိဘူး။ တတ်သည့်ပညာ မနေသာ ဆိုတဲ့အတိုင်း အင်္ဂလိပ်စာနှင့် ပတ်သက် လို့ကတော့ မေးတဲ့သူမရှိတောင် လူတွေ့ တိုင်း ရှင်းပြချင်နေတာကလည်း ဝါသနာ အရမို့ပါဗျာ။ တစ်လောတုန်းကလည်း ရွာကို အလည်လာတဲ့ အငြိမ်းစားအထက်တန်း ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီးနှင့် ကျနော် အင်္ဂလိပ်စာအကြောင်း ဆွေးနွေးကြတာ သူကမြန်မာလိုမေးလိုက် ကျနော်က အင်္ဂလိပ်လိုဖြေလိုက်နဲ့
ဆရာကြီးမှာ တပြုံးပြုံး ခေါင်းတညိတ်ညိတ်နှင့် သဘောတွေလွှတ်ကျပုံကတော့ သောက်နေတဲ့ ရေနွေးကြမ်းတောင်သီး တယ်။သူကအင်္ဂလိပ်လိုမေးတဲ့အခါကျ ကျနော်က မြန်မာလိုဖြေလိုက်ပေါ့ဗျာ ဆွေးနွေးလို့က very good ဗျို့။ ဆရာကြီးကမေးတယ် " look out ဆို တာကို ဘယ်လိုနားလည်လဲ "- " ဆရာ ကြီး ကလည်း လွယ်လွယ်လေးပါ အပြင် ကိုကြည့်လို့ပြောတာ " " ဟား ဟား ငါ့တူ တကယ်တော်တာပဲကွ " တဲ့။ မတော်ခံနိုင်ရိုးလား ၁၄နှစ်လောက် သင်လာတာကို။ ဒါတောင် အပြင်မှာလေ့ လာတဲ့နှစ်တွေ ထည့်မတွက်သေးဘူး။ ဆရာကြီးက ဆက်မေးတယ် " "စစ်သားတွေ fire လို့ အော်ရင် ဘာလုပ် ရမလဲ " - " မီးသတ်အကြောင်းကြားရမှာ ပေါ့ ဆရာကြီးရယ် " " ဟား ဟားBravo " " အပိုပြောတာ မဟုတ်ပါဘူး ဆရာကြီး ရယ် တကယ်ပြောတာပါ သူတို့နေတဲ့ စစ်တန်းလျား မီးလောင်လို့ အော်တာနေ မှာပေါ့ " ဆိုတော့ "ဟုတ်ပ ဟုတ်ပ ငါ့တူ မင်းထက်တော်တဲ့သူတောင်မင်းလောက်မတော်ဘူး" ။ " how my English language condition? - ကျနော့် အင်္ဂလိပ်စာအခြေအနေ ဘယ် လိုလဲ " မေးတော့ -" very good I power Give you - အရမ်းကောင်းတယ် ငါ မင်း ကို အားပေးပါတယ် " တဲ့။ ဆရာကြီးကပြောသေးတယ်" "ငါတောင် မင်းနဲ့တွေ့မှ water follow, Fish follow တွေ တတ်လာပြီ " တဲ့ , ဒီလိုပဲ ဖြစ်လာရမယ်လေ သိတယ် မဟုတ်လား။ ဆရာကြီးကလည်းတကယ်တော် ကျနော်ကလည်း ခေသူမဟုတ်ဆိုတော့ ကျား နဲ့ ဆင် လယ်ပြင်မှာ တွေ့သလိုဖြစ် နေတာ ။ သူကပြောသေးတယ်" ငါ့တူ မောင်ထက်ခေါင် good တယ်ထင်ရင် Doသာ Do ပါ " "ဟုတ်ကဲ့ ဆရာကြီး ရဲ့ စကားတွေကို keep inside my body= ကျနော့် ရင်ထဲသိမ်းထားပါ့မယ်" ဆိုတော့ " ငါ့တူကတော့ တော်ပြီးရင်းတော်ရင်း" ဆိုပြီး ရယ်နေပါတယ်။ ကျနော်လည်း အချိန်လည်းအတော်လင့်သွား၍ နှုတ် ဆက်ပြီး ပြန်တော့မယ်ပြောရာ ဆရာ ကြီးက " အင်္ဂလိပ် လိုလေးနှုတ်ဆက်မှ ပေါ့ မောင်ထက်ခေါင် " လို့ ပြောသဖြင့် နေ့လည်ပိုင်းဆိုတော့ " good afternoon " လို့ နှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီလောက်အင်္ဂလိပ်စာကျွမ်းကျင် အောင် ကျနော့်မှာ နှစ်ပေါင်း ဆယ့်လေး ငါးခြောက်နှစ် လေ့လာခဲ့ရပါသဖြင့် ကျနော့်လိုတော်၍ ကျနော့်လို speak ချင် သူများ ကျနော့်လိုပဲ many many try ကြပါလို့ တိုက်တွန်းပါရစေ။.